New Trends na PVC flooring Market 2019-2025-News-Topflor China nwere oke
Echiche:59 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
PVC flooring ahịa amụma banyere nnukwu nchekwa ya site na The Research Insights. Ọ na-enyekwa nkọwa zuru ezu banyere azụmaahịa site na ịnye data data dị ka ọnọdụ, ogo ahịa, mbak, na oke uru.
A na-eme PVC) n'ọtụtụ ngwaahịa ala, gụnyere ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa nwere ọdịdị ọka osisi faux. Emere ya site na plastic plastik emebere iji mee ulo na ulo oru. PVC anaghị egbochi mmiri ma mara ya maka ogologo oge ọ na-eyi ogologo oge.
N'otu aka ahụ, ọ na-adọrọ uche gaa na nkuzi nke ndị otu a nwere ike ime ka nguzo ha n'ahịa ma bawanye ego ha na-enweta n'afọ ndị na-abịanụ. Na-aga n'ihu na teknụzụ na-aga n'ihu ma na-abanye na cornersntanetị na n'akụkụ ndị dị anya nke ụwa na-ahụ maka mmepe dị ịrịba ama nke Market PVC flooring.
Ihe a na-achọ maka ahịa PVC ụlọ na-ebili nke ukwuu ka ọ na-egosi ịnye ahụmịhe ka mma yana n'ihi nke a ahịa na-egosipụta nnukwu ogo na nha ya. A na-atụ anya na ọganihu nke teknụzụ ya ga-eme nke ọma na afọ ndị na-abịanụ.
Ma, ugbu a, a na-atụ anya na n'ime afọ ole na ole sochirinụ, ụfọdụ mpaghara ndị ọzọ nwere ike iweghara ma bụrụ ahịa ahịa mpaghara kachasị mma. A na-atụ anya na a ga-ahụkwa ụlọ ahịa PVC a na-ahụ maka ịrị elu dị elu na ahịa n'ọdịnihu dị nso n'ihi ọnụnọ nke ọnụ ọgụgụ mmadụ buru ibu, na-abanye na mpaghara ahịa a.